April 2015 - Page2of3- DVB Multimedia Group
· by DVBDadmin · 11 Apr, 2015
Highlights of DVB’s ‘Noise Pollution’ Debate
This Sunday at 7:15pm on DVB TV the new DVB Debate on ‘When does sound becomes noise?’, but now already the most remarkable quotes from this special ‘Thingyan Debate’, carefully selected for you by...
· by DVBDadmin · 10 Apr, 2015
Noise Pollution: Facts & Views
Don’t miss the next DVB Debate Thingyan Special about ‘when sound becomes noise’. Get ready for Sunday’s first broadcast at 7:15 pm on DVB TV, and read this carefully selected factsheet in advance. Download...
· by DVBDadmin ·7Apr, 2015
အခုအပတ် DVB Debate ကို ပြီးခဲ့တဲ့လ ၂၈ ရက်နေ့ကပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ ဒီဘိတ်ကို ထုတ်လွှင့်ပြသ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မဟာအခါသင်္ကြန်ကာလနဲ့တိုက်နေတာကြောင့် ကြိုရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဒီကနေ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျငကြာင်းအရာကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေ၇တဲ့ ဆူညံသံတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာနေတဲ့ ကားသံ၊ ဟွန်းသံ၊ လော်စပီကာအသံ၊ မီးစက်သံ၊ ထုသံရိုက်သံတွေနဲ့ အနီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အသေးစားအလတ်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကထွက်တဲ့ ဆူညံသံ စတဲ့ဆူညံသံတွေဟာ နေ့စဉ်လူမှုဘ၀တွေအပေါ် တဖြည်းဖြည်း၇ိုက်ခတ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆူညံသံတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ...
· by DVBDadmin ·4Apr, 2015
DVB Debate Highlights: Natural Disasters
The most interesting quotes of today’s debate on location in Pathein, about ‘How to prevent against Natural Disasters?’. These highlights, pictures and cartoon may be used by media, as long as properly credited to...
· by DVBDadmin ·3Apr, 2015
Natural Disasters: Facts & Figures
Get ready for the next DVB Debate about ‘How to prevent against Natural Disasters?’ with this 1-page press kit; all the facts and figures that count. Download the PDF here: dvbdebate.net/press. Join the Debate...